Izitebhisi ezimangalisayo ze-2BR/2BA cottage ukusuka ogwini
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Brandi
Nethezeka futhi ujabulele umoya ohelezayo wasolwandle kuleli kotishi lasebhishi elihle elakhiwe ngo-2020 elinempahla nemishini emihle yekhwalithi.
Iyunithi ye-Ocean Breeze G ilala ngokunethezeka okungu-6 inamagumbi okulala angu-2 kanye nosofa wendlovukazi wokulala egumbini lokuphumula. Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nenkosi kanye negumbi lokugezela eligcwele elizimele, kanti igumbi lesibili nalo linombhede olingana nenkosi kanye nokufinyelela okuyimfihlo endlini yokugezela yesibili egcwele (etholakala futhi ephasishi).
Ukupaka izimoto ezi-2 kutholakala ngaphandle komnyango ongaphambili (izitebhisi ezimbalwa eziya kuvulandi).
Uma usungaphakathi uzothola ukuhlobisa okukhanyayo, okunomoya onama-TV wesikrini esiyisicaba egumbini lokuhlala kanye negumbi lokulala ngalinye. Ikhishi eligcwele linempahla yensimbi engagqwali, izinto zokubala ze-quartz ezikhazimulayo, nazo zonke izitsha ozozidinga ukuze ulungiselele idili lakho elimnandi lokudla kwasolwandle. Igumbi lokudlela linetafula elihlala abantu abangu-4, elinezihlalo zamabha ama-2.
Igumbi lokuwasha elinewasha eligcwele usayizi kanye nesomisi liholela egcekeni elingasese elibiyelwe ngemuva lapho uzothola khona i-grill, kanye nefenisha ye-patio yokudlela i-al fresco, noma ukuhlala ngasemgodini womlilo. Kukhona neshawa yangaphandle ongayikhipha ngemuva kosuku olwandle.
Izindawo zokuhlala e- Ocean Breeze Cottages